यस्ता छन् कुकुरबारे रोचक पक्ष : असल साथीमात्र होइन ज्यान लिनपनि सक्छ ! « Lokpath
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार २०:१७
यस्ता छन् कुकुरबारे रोचक पक्ष : असल साथीमात्र होइन ज्यान लिनपनि सक्छ !
प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार २०:१७
मान्छेको सबैभन्दा इमान्दार साथीका रुपमा कुकुरलाई लिने गरिन्छ । पाणी शास्त्री र मानववैज्ञानिक जोन ब्रेडस् मान्छे र जनावरबीचको सम्बन्ध र आपसी व्यवहारको अध्ययन गर्ने गर्छन् ।
कुकुरको सुँघ्ने क्षमता किन तेज हुन्छ?
कुकुरको कमालको सुँघ्ने क्षमता हुन्छ । जेकबसन या वोमेरोनेजल नामको अंगका कारण उसले सुँघ्न सक्छ । यो कुकुरको नाक र मुखको माथिल्लो भागमा हुने गर्छ । वैज्ञानिकले अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन् कि यो अंग किन हुन्छ? तर बिरालो र अन्य जनावरमाथिको अध्ययनले के बताउँछ भने शायद यो क्षमता कुकुरसँग यसकारण हुन्छ कि, अरु कुकुरले छोडेको संकेतलाई पहिचान गर्न सकून् ।
कुकुरले देख्छ कस्तो?
कहिलेकाहीँ तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि, कुकुरले कस्तो देख्छ? कुकुरले हरियो, पहेँलो, र नीलो रंग त पत्ता लगाउन सक्छ तर कुकुरले रातो रंग भने पहिचान गर्न सक्दैन । यो रंगलाई कुकुरले फरक देख्ने गर्छ ।
कुकुर मुस्कुराउँछ पनि । हामी जसरी मुस्कुराउँछौँ, त्यसरी नमुस्कुराए पनि जोन ब्रेडसका अनुसार कुकुर आफ्नो मालिकसँग थोरै माया पाउनका लागि मुस्कुराउने गर्छ ।
कुकुरलाई यो कुराको फिलिङस् हुँदैन कि, आफूले केही गलत गरेँ । तर धेरैलाई के लाग्छ भने कुकुरले आफ्नो गल्तीलाई फिल पनि गर्न सक्छ । कतिलाई त लाग्छ कि, कुकुरले गिल्टी फिल पनि गर्छ । तरु विज्ञानका अनुुसार कुकुरले उक्त समय शारीरिक हाउभाउका कारण प्रतिक्रिया दिन्छ तर उसलाई फिलिङस हुँदैन ।
निकै धेरै स्तनधारी जीव, प्रेम, डर, बेचैनी र खुशीजस्ता कुराको महसूस गर्न सक्छन् । अझ कुकुरले त मान्छेका लागि अरु पनि भावनात्मक प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
धेरैलाई लाग्ने गर्छ कि, कुकुरले सबैलाई माया गर्छन् । तर, वैज्ञानिकका अनुसार कुकुरको व्यवहार यसले कति माया गर्छ भन्नेसँग निर्भर हुन्छ । एमरी युनिभर्सिटीका प्रोफेसर प्रेगरी बन्र्सले कुकुरलाई एमआरआईका दौरान स्थिर खडा हुनका लागि तालीम दिए । यो बुझ्नका लागि कि, मालिकलाई देख्दा कुकुरले दिमागमा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ । त्यतिबेला बुझियो, कुकुरले मान्छेको बोडी ल्याङ्ग्वेज चिम्पान्जीले भन्दा बढी बुझिरहेको हुन्छ ।
विश्वकै महंगो जेल, जहाँ एक कैदीको लागि अर्बौ खर्च गरिन्छ
काठमाडौं । मानिसले गरेका गल्तिको सजाय स्वरुप कारागार अर्थात जेलमा राख्ने गरिन्छ ।
८७ दिनपछि भेटियो भारतले चन्द्रमामा पठाएको ‘विक्रम ल्याण्डर’
काठमाडौं । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ले चन्द्रमामा पठाएको विक्रम ल्याण्डर भेटिएको
काठमाडौं । प्रेम अपनत्वको भाव हो । भनिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ | प्रेम